I-RTX 2080 vs GTX 1080 - Yikuphi okuhle kakhulu ekugembuleni? - Ukudlala
I-RTX 2080 vs GTX 1080 - Yikuphi okuhle kakhulu ekugembuleni?
Kwakukhona kanye nesikhathi lapho imidlalo ye-PC yayingakwazi ukuncintisana neziduduzo. Intuthuko yanamuhla ilethe inguquko embonini ye-PC yokudlala. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma ulinganiswe ngokwanele, ungadlula ngisho neziduduzo ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Kodwa-ke, ukudlala okuphezulu kwe-PC kuncike ekuthini kwekhadi lakho lesithombe.
I-RTX 2080 yeNVidia idale ukubhuza impela, futhi akekho ongasiza kodwa ayiqhathanise ne-GTX 1080 evelele. Vele, izinto ezindala zivame ukungamelani nokuthuthuka kwanamuhla-noma kunjalo, i-RTX 2080 Vs. I-GTX 1080 ayikho mayelana nokuqhathanisa.
Kungokusiza wenze ukhetho olufanele. I-athikili izoqhathanisa lezi ezimbili ukusiza ukunquma ukuthi yikuphi okuzohlangabezana nezidingo zakho kangcono. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kokwehluka kokusebenza, kukhona umehluko wezindleko omkhulu futhi. Ngakho-ke, ake siqale!
I-RTX 2080 vs GTX 1080:
Nayi ishadi lokuqhathanisa elisheshayo elizokusiza uqonde umehluko ngaphandle kokuthola ukujula. Lokhu kungakusiza ukuthi ufunde into noma ezimbili ngamakhadi amabili wemidwebo. Uma ufuna ukwandisa ulwazi, qhubeka ufunda phambili.
Isivinini Sememori 14 GBPS 10 GBPS
Imemori yevidiyo 8 GB DDR6 8 DDR5X
Isekelwe Clock 1.5 GHz 1.6 GHz
Thuthukisa i-Clock 1.8 GHz 1.73 GHz
Amaprosesa okusakaza 2,944 2,560
Imibala Tensor 368 Akunjalo
Ama-RT Cores 46 Akunjalo
Amayunithi Wokuthungwa 184 104
Ukuxhuma kwamandla I-1x 8 Pin ne-1x 6 Pin 1 x 8 Iphini
Izinguquko eziphawuleka kakhulu ze-RTX ukuhlanganiswa kwe-DDR6 ekwazi ukuletha cishe kabili isivinini sememori. Kodwa-ke, umehluko ophakeme usezingxenyeni zala makhadi.
I-GTX 1080 inikezela ngenqubo entsha ye-16nm FinFETT eyedlula okunye ukusebenza, ukuguqula, kanye nezinqubo ezisebenza kahle. Ngakho-ke, ungalindela ukuthi i-NVidia izenzele yona ngokwengeza kwamuva emndenini we-GPU.
I-RTX ikulethela ukwakheka kwe-GPU okuguqukayo. Kukunika amandla okuthola ukukhanya okukhanyiswe ngokukhanyayo ngokulandela umkhondo we-20-25x kangcono. Uma ubhide lama-node we-RTX asuselwa ekuphendukeni ngokumelene ne-CPU, inikeza ukukhushulwa okuphawulekayo kwe-30x. Ngokwengeziwe, uthola ama-Tensor cores nama-RT cores akulethela ukufinyelela emkhakheni we-AI wemboni yokudlala.
Lungisa ikhodi yephutha le-GeForce Experience 0x0003
I-Tencent Gaming Buddy ye Windows 10
I-RTX 2080 vs GTX 1080 - Impi Yokusebenza
Vele, njengoba kushiwo ngenhla, kungabonakala sengathi i-RTX 2080 ingumnqobi ocacile wokucaciswa. Kodwa-ke, i-GTX kufanele inikezwe ithuba elifanele lokwethula udaba lwayo. Ngakho-ke, sibathethisa omunye nomunye empini yokusebenza yangempela.
Ukudlala kwe-HD:Zombili izingxenye zisekela ukudlala kwe-HD. Ungasebenzisa kahle i-1080P kuye ku-4K ngaphandle komthelela omkhulu ekusebenzeni. Lapha, bobabili basekela isipiliyoni semidlalo esigcwele.
Amanani wozimele:I-GTX 1080 inikezela ngozimele abanele ukuze ube nokuhlangenwe nakho okuncane. Kodwa-ke, i-RTX 2080 ngokungangabazeki iyashelela ngamazinga wohlaka asuka ku-1.15x kuye ku-1.5x we-GTX 1080. Ngakho-ke uma ufuna isipiliyoni sokudlala esingenamthungo, i-RTX ime kangcono.
Izibhamu Ezinkulu Ze-RTX 2080:
Ngaphandle komehluko onikeziwe, kunezibhamu ezimbili ezinkulu eza ne-RTX 2080 etafuleni: URay tracing ne-Deep Learning Super Sampling (DLSS). Zombili lezi zici ziba yisidingo esibalulekile kwihardware yanamuhla yokudlala. Ngisho neziduduzo zakamuva zeGaming zigcizelela ukubaluleka kwalezi zinto ezimbili.
Ima kuphi i-GTX 1080?
Ngokubheka imininingwane, kuyacaca ukuthi i-RTX 2080 idlula i-GTX 1080 cishe kuzo zonke izici. Kodwa-ke, kubiza kakhulu. Njengekhadi le-GPU lesizukulwane esilandelayo, unokunyuka okuhle kakhulu ekusebenzeni nasemandleni. Kodwa-ke, kuletha umbuzo wokuthi 'Ima kuphi i-GTX 1080?'
Yebo, cabanga nge-GTX 1080 njengomphathi wokugcina wefulegi lomdlalo wesizukulwane esedlule. Ngokufika kwe-RTX, uthola izinto zokudlala ezihlakaniphile kanye nesipiliyoni sokucwilisa esizodlondlobala kuwo wonke amapulatifomu wokudlala.
Ngakho-ke, uma ungafuni ukungena kuleyo jibber-jabber, i-GTX 1080 ibambe iqine. Kubone ukwehla kwentengo okukhulu muva nje. Uma ufuna ukuthuthukisa i-PC yakho ibe yipulatifomu yokudlala enamandla, i-GTX 1080 iletha ukusebenza okuhle ngaphandle kokushisa imbobo kubhajethi yakho.
Yini uRay Tracing?
Ukulandela ngomkhondo uRay kuyisici esitholakala kumayunithi amaningi wokuqhafaza, kufaka phakathi i-GTX 1080. Kodwa-ke, awekho ama-GPU ngaphambi kwe-RTX 2080 agxile ngokuqinile kule nto. Kukulethela umfutho ekusebenzeni kwe-3D futhi kucwenge ukukhanyisa kwemidlalo.
Ngakho-ke, uthola umbala ongcono nokukhanyisa okungokoqobo kokusebenza kwemifanekiso ephezulu ngaphandle kokukhokhela i-FPS nezinye izinto.
Isebenza kanjani iDLSS?
I-Deep Learning Super Sampling ivumela i-GPU ukuthi iguqule ngokuzenzakalela noma yehlise ukusebenza ngokugxila ezindaweni zemidlalo. Noma nini lapho ungadingi ukugxila 'esinqumweni,' kuzonciphisa ukugxila, obekungeke kube nomthelela omkhulu, kepha okwanele ukukunika amandla wokusebenza. Uma unemfuneko yokulungiswa okuphezulu endaweni yesehlakalo, i-GPU izothuthukisa ukusebenza.
Isibonelo: Uma ujaha umuntu othile kugeyimu, okuzungezile akudingi ukugxila ukuze isinqumo sizokwehlela sona. Kodwa-ke, uma ukuhlaka noma umdlalo ozinzile, okubonakalayo kuzokwenyuka.
I-RTX 2080 vs GTX 1080: Uzoletha kuphi?
Ukube ubucabangele i-RTX 2080 ngesikhathi yethulwa, bekungeke kube ukutshalwa kwezimali okufanelekile. Ikusasa maqondana nokulandelwa kwemisebe namanye ama-tweaks alingaqinisekiswa. Kwakungekho midlalo eminingi lapho ungathola umvuzo ogcwele ekusebenzeni kwe-RTX 2080. Ngaleso sikhathi, i-GTX 1080 bekungaba ukukhetha okungcono.
Noma kunjalo, izikhathi sezishintshile manje. I-RTX 2080 ngokungangabazeki ingukutshalwa kwemali okuyigugu okungabonisa ikusasa lakho ukuthi iyunithi lakho lokudlala eminyakeni ezayo.
I-RTX 2080 idlula i-GTX 1080 cishe kukho konke. Kodwa-ke, i-GTX1080 kusengukutshalwa kwezimali okubonakalayo futhi okungabizi kakhulu kubadlali bama-hardcore noma ngubani ofuna ukulungisa ukusebenza kwabo kwe-GPU ngaphansi kwesabelomali. Kwakuyiklasi eliphambili kakhulu manje elithathelwa indawo yi-RTX. Noma kunjalo, i-RTX ibiza kakhulu futhi isizukulwane esilandelayo se-GPU. Uma ufuna ukuba nesipiliyoni esihle kakhulu sokudlala, khona-ke i-RTX 2080 iyindlela ongahamba ngayo ngaphandle kokubheka izindleko.
I-WhatsApp vs Signal
I-iPhone 12 vs Mini vs Pro ne-Pro Max
Idethi Yokukhishwa I-Queen of Flow Isizini 2 : Ingabe Iqinisekisiwe Noma Cha?
U-Jussie Smollett Net Worth – Iminyaka, Umsebenzi, Impilo Yasebancane nokuningi!